मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-04 > टुक्रिएको सम्बन्ध
पश्चिमी समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको टुक्रिएको सम्बन्ध हो - मित्रता जो रिस उठेको छ, नबोलेका प्रतिज्ञाहरू, र आशा निराश छन्। धेरैले सम्बन्धविच्छेद वा एक बच्चाको रूपमा सम्बन्ध विच्छेद। हामीले अस्थिर संसारमा दुखाइ र अशान्ति महसुस गर्यौं। हामीले सिक्नुपर्‍यो, अधिकारी र कार्यालयहरू सँधै भरोसायोग्य हुँदैनन् र मानिसहरू मूल रूपमा आफैंको हेरचाह गर्छन्।
हामी मध्ये धेरैले यस्तो अनौंठो संसारमा हराएको महसुस गर्दछौं। हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँबाट आएका हौं, हामी अहिले कहाँ छौं, हामी कहाँ जाँदैछौं, कसरी पुग्ने, वा हामी वास्तवमै कहाँ छौं। हामी जीवनको खतरालाई जतिसक्दो चाँडो नेविगेट गर्न खोज्छौं, जस्तै खदान क्षेत्रबाट हिँडेर, हामीले महसुस गरेको पीडा नदेखाईकौं र हाम्रो प्रयास र हाम्रो जीवन सार्थक छ कि छैन भनेर जान्दैनौं।
हामी धेरै एक्लै महसुस गर्छौं र आफूलाई बचाउन खोज्छौं। हामी आफूलाई कुनै पनि कुरामा प्रतिबद्ध हुन हिचकिचाउँदछौं र विश्वास गर्दछौं कि मानिसले दुःख भोग्नु पर्छ किनकि परमेश्वर क्रोधित हुनुहुन्छ। आजको संसारमा ईश्वरको धारणाले कुनै अर्थ राख्दैन - सही र गलत केवल विचारको कुरा हो, पाप पुरानो जमानाको धारणा हो र दोषी भावनाहरू मनोचिकित्सकहरूको लागि पोषण हो।
मानिसहरू बाइबलमा येशूको बारेमा पढ्छन् र उनी अलौकिक जीवन बिताएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, मानिसहरूलाई छोएर मात्र उनीहरूलाई निको पार्दै, रोटीलाई कतैबाट बाहिर निकाले, पानीमाथि हिँडे, सुरक्षात्मक स्वर्गदूतहरूले घेरेका थिए र शारीरिक रूपमा हानि पुर्‍याएका थिए। , आजको संसारसँग यसको केही सरोकार छैन। त्यसरी नै, येशूको क्रूसको कथा आजको जीवनका समस्याहरूबाट अलग भएको देखिन्छ। उनको पुनरुत्थान उसको लागि खुशीको खबर हो, तर म किन यो मेरो लागि शुभ समाचार हो?
येशूले संसारको अनुभव गर्नुभयो
एक दु: ख संसारमा हामीले भोग्ने पीडा पनि त्यस्तै प्रकारको पीडा हो जुन येशूलाई थाहा थियो। उनलाई उनको एक नजिकको चेलालाई चुम्बन गरेर धोका दिइयो र अधिकारीहरूले उनलाई दुर्व्यवहार गरे। येशूलाई थाहा थियो कि एक दिन त्यो खुशी हुनु के हो र अर्को दिन उसले उपहास गर्यो। येशूका काचे भाइ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई रोमीहरूले नियुक्त गरेको शासकले मारेका थिए किनभने यूहन्नाले शासकको नैतिक कमजोरीहरूको पर्दाफास गर्थे। येशूलाई थाहा थियो कि ऊ पनि मारिनेछ किनकि उसले यहूदी धार्मिक नेताहरूको शिक्षा र हैसियतमा प्रश्न उठायो। येशू जान्नुहुन्थ्यो कि मानिसहरूले उहाँ बिनाकारण घृणा गर्नेछन् र साथीहरूले उनी विरूद्ध जानेछन्। यस्तो किसिमको व्यक्ति जो हामीलाई घृणा गर्दा पनि हामीलाई सच्चाइले छोड्दछ एक साँचो मित्र हो, गद्दारको विपरित।
हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू जस्ता छौं जो बरफोलामा डुबेको छ र पौडी खेल्न सक्तैन। येशू हामीलाई मदत गर्न चिसो पानी मा हाम फाल्ने मान्छे हो। उहाँलाई थाहा छ कि हामी उनलाई पक्रन सक्दो कोशिश गर्नेछौं। तर हाम्रो टाउको माथि उठाउने हतोत्साहित प्रयासमा हामी उसलाई पानीमा धकेल्छौं।
येशूले हामीलाई यो भन्दा उत्तम तरिका देखाउन स्वेच्छाले गर्नुभयो। हुनसक्छ हामी त्यस मानिसलाई येशूमा विश्वास गर्न सक्छौं - किनभने हामी उसको शत्रुहरू भएको बेला हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिन इच्छुक थियौं, हामी उसका साथीहरू हुँदा हामी उहाँमाथि कत्ति बढी भरोसा गर्न सक्छौं?
येशूले हामीलाई जीवनको बारेमा केहि बताउन सक्नुहुन्छ, हामी कहाँबाट आएका हौं र हामी कहाँ जाँदैछौं, र हामी कसरी त्यहाँ जान्छौं। उनले हामीलाई सम्बन्धको क्षेत्रका खतराहरूबारे केही बताउन सक्छन् जुन हामीले जीवनलाई बोलाउँदछौं। हामीले उहाँलाई धेरै विश्वास गर्नुपर्दैन - हामी केवल केही प्रयास गर्न सक्दछौं यदि यसले काम गर्दछ भने। यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने, हामी हाम्रो विश्वासमा बढ्ने छौं। वास्तवमा, मलाई लाग्छ हामीले उहाँलाई सधैं सही भएको पाउनेछौं।
हामी प्रायः साथीहरू चाहँदैनौं जो सधैं सही हुन्छन्। यो कष्टकर छ। येशू त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न जो सँधै "मैले तपाईंलाई भनेको छु" भन्छ। ऊ केवल पानीमा हाम फाल्छ, उसलाई डुब्नको हाम्रो प्रयासको प्रतिरोध गर्दछ, नदीको किनारमा हामीलाई तानेर लान्छ र हामीलाई सास फेर्न दिन्छ। र हामी फेरि केहि गलत गर्न नदिएसम्म नदीमा नछाड्नु पर्छ। अन्तमा, हामी उहाँलाई सोध्न सक्छौं कि कहाँ ठेस लाग्ने जोखिमहरू छन् र पातलो बरफ कहाँ छ ताकि हामी यत्तिका पटक उद्धार गर्नु पर्दैन।
येशू धैर्यवान हुनुहुन्छ। उसले हामीलाई गल्ती गर्छ र हामीलाई ती गल्तीबाट ग्रस्त बनाउँछ। उसले हामीलाई सिक्न दिन्छ - तर ऊ कहिल्यै भागदैन। हामीलाई थाहा छैन कि यो अवस्थित छ, तर हामी पक्का हुन सक्छौं कि धैर्यता र क्षमाले रीस र अलगावभन्दा बढी राम्रो काम गर्छ जब यो सम्बन्धको कुरा आउँदछ। येशू हाम्रो शंका र अविश्वास द्वारा चिन्तित हुनुहुन्न। हामी बुझ्न किन हिचकिचाउँछौं भनेर उसले बुझेको छ।
येशू रमाईलो, आनन्द, वास्तविक र दिगो व्यक्तिगत पूर्तिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ जुन हराउँदैन, मानिसहरू जसले तपाईंलाई साँच्चिकै प्रेम गर्छन्, उनीहरू जान्दछन् कि तपाईंलाई कस्तो लाग्छ। हामी सम्बन्धका लागि सिर्जना गरिएका थियौं, त्यसकारण हामी उनीहरूलाई यती धेरै चाहान्छौं र यही कुरा येशूले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी चाहन्छौं कि हामी आखिरमा उहाँकहाँ आऊ र उसको खुशीयाली, रमाईलो पार्टीको नि: शुल्क निमन्त्रणालाई स्वीकार गरौं।
हाम्रो जीवन अगाडि छ जुन बाँच्न लायक छ। त्यसकारण येशूले राजीखुसीसाथ यस संसारको पीडा सहनुभयो हामीलाई एक उत्तम संसार देखाउन। यो यस्तो छ मानौं हामी एक अन्तहीन मरुभूमिमा यात्रामा छौं र कुन मार्ग लिने बारे थाहा छैन। बालुवाको आँधीको सामना गर्न येशू आफ्नो प्रमोदवनको सुख्खा र सुरक्षा छाड्नुहुन्छ र हामीलाई देखाउँनुहुन्छ कि यदि हामी मात्र दिशा बदल्छौं र उहाँलाई पछ्याउँदछौं भने, हामीलाई चाहिने सबै कुरा दिनुहुन्छ।
येशू हामी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि बताउँछ। हामी स्वर्गमा छैनौं! जीवन दुख्छ। हामीलाई यो थाहा छ र उहाँ यो पनि जान्नुहुन्छ। उनले यो अनुभव गरे। यसैले उसले हामीलाई यस अराजकताबाट मुक्त गराउन र हामीलाई सुरुदेखि नै हाम्रो लागि चाहेको प्रशस्त जीवन बिताउन सक्षम बनाउन चाहन्छ।
पारिवारिक सम्बन्ध र मित्रता दुई खुशीयाली हुन्, जीवनमा पूरा गर्ने सम्बन्धहरू जब तिनीहरू राम्रोसँग काम गर्छन् - तर दुर्भाग्यवस तिनीहरू सधैं राम्रोसँग काम गर्दैनन् र त्यो जीवनमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
त्यहाँ दु: ख ल्याउने तरिकाहरू छन् र त्यहाँ तरिकाहरू छन् जसले खुशी र आनन्दलाई प्रमोट गर्दछन्। कहिलेकाँही हामी दुखाइ र खुशीबाट बच्न खोज्छौं। त्यसकारण हामीलाई मार्गनिर्देशन चाहिन्छ जब हामी मरुभूमिको बीचमा ट्रेस बिनाको मार्गमा लड्छौं। एकछिन पर्खनुहोस् - त्यहाँ केहि ट्रेसहरू छन् - येशूको जीवनका ट्रेसहरू जसले जीवनको फरक तरीका देखाउँदछ। यदि हामी उसको ट्र्याक पछ्याउँदछौं भने हामी त्यो ठाउँमा पाउनेछौं।
सृष्टिकर्ता हामीसँग सम्बन्ध, प्रेम र आनन्दको मैत्री चाहन्छ, तर हामी अनुपस्थित र डराउँछौं। हामीले हाम्रो सिर्जनाकर्तालाई धोका दिएका थियौं, लुकाइएको थियो र उहाँसँग हुन अस्वीकार गर्‍यौं। हामीले पठाएका पत्रहरू हामी खोल्न सकेनौं। यसैले परमेश्वर शरीरमा, येशूमा, संसारमा आउनुभयो र हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी डराउनुपर्दैन। उसले हामीलाई माफ गर्यो, उसले हाम्रो लागि अझ राम्रो चीज तयार गर्यो, ऊ हामी उसको घर फर्कन चाहन्छ, जहाँ सुरक्षित महसुस गर्छ।
सन्देश बोक्नेलाई मारियो, तर यसले उसको सन्देश टाढा जान दिँदैन। येशू हामीलाई सधैं मित्रता र क्षमा प्रदान गर्दछ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र हामीलाई मात्र हामीलाई मार्ग देखाउन प्रस्ताव गर्दछ, तर हामीसँग यात्रा गर्न र हिउँदो पानीबाट माछा पकाउँदछौं यदि हामी त्यसमा खस्छौं भने। उहाँ हामीलाई मोटो र पातलो पार गर्न साथ दिनुहुनेछ। ऊ अन्तमा हाम्रो भलो र बिरामीको लागि चिन्तित छ। हामी उहाँमाथि भर पर्न सक्छौं, सबैले हामीलाई निराश गरे पनि।
येशूजस्तो साथीको साथ तपाईले आफ्ना शत्रुहरूलाई डराउनुपर्दैन। उहाँसँग ब्रह्माण्डमा सबै शक्ति र शक्ति छ। ऊ अझै सबैलाई आफ्नो पार्टीमा आमन्त्रित गर्दछ। येशूले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा उसको पार्टीमा प्रमोदवनमा खर्च गर्नुभयो। उहाँ तपाईंलाई निम्ता दिनको लागि बाहिर जानुभयो। ऊ आफ्नो समस्याको लागि मारियो, तर त्यसले उसलाई तपाईंलाई माया गर्न रोक्दैन। तपाईको बारेमा के सायद तपाई अझै विश्वास गर्न तयार हुनुहुन्न कि कोही त्यस्तो वफादार हुन सक्छ। उहाँ बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंको अनुभवले तपाईंलाई त्यस्ता स्पष्टीकरणहरूको बारेमा पर्याप्त सशंकित बनाउँछ। तपाईं येशूमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ! यसलाई आफैंले प्रयास गर्नुहोस्। उसको डु in्गामा जानुहोस्। तपाईं चाहानुहुन्छ भने पछि पछाडि जानु सक्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ तपाईं बस्न चाहानुहुन्छ र केहि बेर डु drown्गामा डुब्ने मानिसलाई आमन्त्रित गर्न आफै रोइ start सुरु गर्नुहोस्।